Xagee Kala Marayaan Trump iyo Biden? | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Xagee Kala Marayaan Trump iyo Biden?
Xagee Kala Marayaan Trump iyo Biden?
Maalintii afaraad ayaa dadweynaha Mareykanka sugayaan natiijada oo laga cabsi qabo inay dib u dhacdo, taasoo qaadan karta maalmo ayna ugu wacan tahay tartanka oo aad isugu dhow Gobollada muhiimka ah ee la isku hayo iyo dad ka badan kuwii hore oo codeeyay.
Waxaan weli lagu kala bixin oo codad isu dhow gobollada kala ah:
Arizona: Waxay leeday 11 ergo cod, waxaana ku horeeya Joe Biden oo warbaahinta qaarkeed sida AP, Fox News, Aljazeera iyo kuwa kale ay xisaabta ugu dareen Musharaxa Joe Biden, laakiin waqti ayey qaadan doontaa waqti si loo ogaado natiijada ugu danbeysa, iyadoo taageerayaasha Trump ay xalay isku dayeen inay galaan goob cod bixinta lagu tirinayey.
Georgia: Waxay leedahay 16 ergo cod, waxanaa horeeya Trump, laakiin waxaa soo yaraanaya codadka uu ku horeeyo. Kooxda Trump ayaa olole ugu jirta in la joojiyo tirinta codadka dib u soo dhacay.
Pennsylvania: Waa Gobolka uu tartanka ugu adag ka socdo, waxaan shalay ku horeeyay codad ka badan 600,0000 Madaxweyne Trump, laakiin iyadoo ay socoo tirinta codadka lagu dhiibtay Boostada waxaa soo yaraanaya hoggaaminta Trump oo hoos ugu dhacday in ka yar 200,000 cod. Gobolkan waxay tirintu soconeysaa ilaa Jimcaha. Guddiga ololaha Trump ayaa dacwad ka furay Gobolkan.
Nevada: Waxay leedahay 6 ergo oo cod, waxaana ku horeeya Joe Biden, laakiin waxaa isu dhow codadka iyadoo la sugayo codadka harsan.
North Carolina: waxay leedahay 15 ergo cod, iyadoo uu horeeyo Donald Trump.
Alaska: Waa Gobol yar oo ugu shisheeya Mareykanka, wuxuuna heystaa 4 ergo Cod, iyadoo la ogyahay inuu caadiyan yahay gobol Jamhuuri ah oo Trump u codeynaya, laakiin aan natiijo rasmi ah laga heyn, codkana la tirinayo.
Gobollada Wisconsin iyo Michigan ayuu ku guuleystay xalay xilli danbe musharaxa Dimoqraadiga Jeo Biden, taasoo si weyn ugu dhoweysay guusha, laakiin waxaa weli u harsan inuu helo codadka Gobollada uu ku horeeyo ee Arizona, Nevada si uu guusha u gaaro inta aan la isla gaarin Gobolka la isku dhegan yahay ee Pennsylvania.
Lixdaan Gobol oo ah kuwa ugu waa weyn ee go’aamiya guusha ayaa weli waxaa socda tirinta coiodkooda walow lagu kala horeeyo haddana cid gaar ah iskuma haleyn karto kala horeyntaan, inkastoo Gobolka Arizona warbaahinta qaarkeed ay siyeen Jeo Biden, taasoo codadka uu heysto ka dhigeysa 264, halka warbaahinta ka reebtay sida CNN, ABC iyo kuwa kale ay codadka Biden ka dhigeen 253.
Xorriya Online Kala Soco Natiijada Doorashada.